Soft Plush သစ်ကုလားအုတ် & တိရိစ္ဆာန်လက်ကိုင်အိတ်ကလေးများသည် Teether ဖြင့်လှုပ်သည်
အရောင် ယုန် ပင်လယ်လိပ် ငှက် ပုလဲ2ခွေး2ယုန်2ခှေး သစ်ကုလားအုပ် ခွေး3ဇီးကွက် ဟုတ်တယ်နော် ခရမ်းရောင် 1pcs ခရမ်းရောင်နု စိမ်းလန်းသော အဝါရောင် B
ယုန် ပင်လယ်လိပ် ငှက် ပုလဲ2ခွေး2ယုန်2ခှေး သစ်ကုလားအုပ် ခွေး3ဇီးကွက် ဟုတ်တယ်နော် ခရမ်းရောင် 1pcs ခရမ်းရောင်နု စိမ်းလန်းသော အဝါရောင် B
Soft Plush သစ်ကုလားအုတ် & တိရိစ္ဆာန်လက်ကိုင်ကလေးများသည် Teether - ယုန်ဖြင့်လှုပ်သည် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်း: Plush, အထည်
ပုံစံ - သမင်၊
အထုပ်ထဲ၌ပါဝင်သည့်အရာ - 1pcs ကလေးကစားစရာအလန့်တကြား။
Жирафсуперклассный !! Неожидала..приятноудивлена! колосьяивсеясно!